Yaaddessaa Booji'aa: Namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uun fedha - BBC News Afaan Oromoo
Yaaddessaa Booji'aa: Namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uun fedha
12 Muddee 2017
Image copyright Yaddi Bojia
Goodayyaa suuraa Alaabaa Gamtaa Afriikaa Yaaddessaa hojjete
Yaaddessaa Zawugaa Booji'aa weellisaa, ogeessa fakkii fi Giraafiks Dizaayinara. Ogumma qabutti fayyadamees mirga dhala namaaf qabsaa'a.
Sarbama mirga namoomaa Oromoo dabalatee sabaafi sablammoota Itoophiyaa keessa jiran akkasumas sarbama mirgaa Ameerikaa keessatti gurraachota irra gahu balaaleffachuun hojiilee gara garaa hojjetee jira.
Magaalaa Ambootti dhalatee, sababa mootummaan dargii abbaa isaa jalaa ajjeeseef gara Finfinneetti dhufee achitti guddachuu isaa kan himu Yaaddessaan, qabsoon mirga namoomaa amma itti jiru waan ofii isaa fide akka hin taane dubbata.
"Dur osoo namni baay'een waa'ee qabsoo mirga namoomaa hin dhagahiin kan sirritti beeknuufi maatii keenyas kan itti dhabne waan ta'eef hojiin amma itti jiru waanan ofii koof fidedha jechuun natti ulfaata."
"Kanaaf wantoota mirga namoomaa sarbaniifi haqa dabsan wayitan argu, duubatti hin jedhu," jedha.
Yaaddessaan sarbama mirga namoomaa aartiidhaan balaalleffata.
"Aartiin ergaan ati dabarsuu barbaaddu namoota akka hawwatuu fi salphaatti si hubachuu akka danda'an gochuuf humna cimaa qaba, kanaafan aartiitti dhimma baha," jedha.
"Wantan cimsee mormaa ture keessaa tokko saamicha lafa Oromoo maqaa invastimantiin raawwatamaa turedha," kan jedhu Yaaddessaan, sana dabalatee sarbama mirga namoomaa hoggantoota siyaasaa akka Baqqalaa Garbaafaa irra gahe balaaleffachuun fakkiiwwani fi hojii giraafiiksii adda addaa hojjachuu isaa nutti hime.
Goodayyaa suuraa "Ogummaan qabuun jarri kun akka hin irraanfatamnen godha"
"Yeroo baay'ee mootummaan nama kan hidhuuf akka isaan irraanfatamaniifi, 'kan ijarraa fagaate, onneerras fagaata' jechamni jedhu jira, animmoo ogummaan qabuun jarri kun akka hin irraanfatamne, akka hin dagatamnen godha," jedhe.
Kanaan alattis Ameerikaa keessatti warraaqsa mirga gurraachotaa 'Black lives matter' jedhamuun gaggeeffamaa ture irrattis adda durummaan qooda fudhataa ture.
Wayita gaaffiif deebii kana goonettis, agarsiisa fakkii 'Truth be told' ykn Dhugaan haa himamu jedhu mirga gurraachotaa irratti xiyyeeffate ji'a tokkoof turu Ameerikaa magaalaa amma keessa jiraatu Si'aatil keessatti qopheessa akka jiru nutti hime.
Yaaddessaan fakkii kaasuu qofa osoo hin taane ni weellisas. Albamni isaa badhaasota gara gara injifateera.
"Wallee daa'imummaa kootii kaaseen jaaladha, kanan weellisu garuu nama gammachiisuuf osoo hin taane, namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uuf jedheeni," jedha.
Alaabaa Gamtaa Afriikaa
Namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uun fedha
"Dur dargaggeessa yeroon ture obboleessi koo fakkii ni kaasa ture, isatu akkan artiin hawwatamu na godhe. Ergan as Ameerikaa dhufee ammoo Yuunivarsiitiiwwan lama irraa 'Visual Communication' fi 'Graphics design' dhan eebbifameen jira." jechuun BBC'tti himeera.
Hojiiwwan giraafiiksii hojjete keessa tokko Alaabaa gamtaa Afriikaati. Alaabaan inni hojjetes hojii dizaayinaroota guutuu addunyaa 116 keessaa dorgomee injifachuu isaa nutti hime.
"Akkan injifadhu kan na taasise ergaa isaati. Magariisni Afriikaan qabeenya uumamaan badhaatu ta'uushee mul'isa, urjiileen biyyoota kan bakka bu'an yoo ta'u aduun ammoo Afriikaan kolonii jalaa baatee ofiin of bulchaa jiraachu ishee mul'isa," jedha.
Injifachuu isaatiin doolaara 10,000 akka argatee fi hoggantoota biyyoota Afriikaa 54 waliin wal-arguuf carraa argachuusaa kan dubbatu Yaaddessaan, qarshii argate caalaa seenaa hojjetetti akka boonu hima.
Aartiin Oromoo yeroo dheeraaf kan hawaasa Oromoo waliin jiraate ta'ulleen beekamtii maluuf hin arganne yaada jedhu qaba Yaaddessaan.
Goodayyaa suuraa Jen. Taaddasaa Birruu fi Nelsan Mandeellaa
"Waggoota digdamman darban Oromoon of haaromsee yeroo aadaa, afaan, amantaa fi lafa isaa qorataa jiru kanatti, aartiistonni Oromoo keessumaa warri waan ijaan mul'atu irratti hojjennu bittinnoofnee jirra, jiddu galeessummaan wiirtuu walitti nu qabu hin qabnu."
"Waan kana adda durummaan eegaluufan yaalii gochaa jira, hanga danda'ametti aartii fi hojiilee aartii wantoota uummanni keenya itti jiru ibsan walitti qabnee dhaalota boruuf dabarsuu qabna," jedha.
Ani kanan amanu jireenya naga qabeessa, mirga ofii dabarsanii kennuu diduu fi mirga namoomaaf mormuutti kan jedhu Yaaddessaan, bultii horatee ijoollee lamas argatee jira.
Wayita ammaas dizaayinara giraafiiksii ta'ee yuunivarsiitii Washiingitan keessa hojjachaa jira.
Viidiyoo Aartii Oromoo fakkiidhaan
Qurxummiin Chaayinaarraa seenu kiiyyessitoota Keeniyaa 'abdii kutachiisaa jira'
Ajjeechaa Najjootti raawwateef mootummaan WBO himate